सुवर्ण समशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पञ्चायत आउने थिएन ! | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > समाचार > सुवर्ण समशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पञ्चायत आउने थिएन !
वीपी र महेन्द्र एउटै वनका दुई बाघः ङ्यारङ्यार गरिहाल्ने
विश्वबन्धु थापा, बरिष्ठ राजनीतिज्ञ
मलाई लागिसकेको थियो, एउटै जंगलमा दुईवटा बाघ अट्न सक्दैनन्, वीपी र महेन्द्र दुबै बाघ हुन् भन्ने मेरो बुझाइ थियो, राजाले कुनै पनि बेला गडबडी गर्न सक्छन् भन्ने संकेत पनि पाइसकेको थिएँ
बाह्य परिस्थितिले भन्दा पनि मान्छेलाई सोचाइले असर गर्छ । राजालाई त्यसैले काम गर्‍यो ।
वीपीको भारत र चीनसँगै राम्रो सम्बन्ध छ, आर्मीमा पनि यसको राम्रै छ, त्यस कारण यो मान्छेले भोलि मलाई फाल्दिने पो हो कि ? अथवा केही न कामको पङ्गु बनाएर पो राख्दिने हो कि ? महेन्द्रको मनमा यस्तै सोच आएछ त्यसबेला । त्यही भएर उनी सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे ।
वीपीको यस्तो व्यक्तित्व थियो, राजालाई डर लाग्ने । उनलाई मनको बाघले खायो ।
राजाले मसित भन्थे, ‘मेरो देखाउन लायक प्रम वीपी हो’ भनेर । तर, लायक भनेर के गर्नु, उनलाई मन परेन ।
त्यतिखेर नेपाल विकासको दृष्टिले आजभन्दा निकै गएगुज्रेको अवस्थामा थियो । यसमा केही परिवर्तन ००७ सालपछि भयो । तर, जति तीव्र रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै भएन । म ००७ सालमा गोरखाको बडाहाकिम भएर गएँ, त्योबेलामा जे अवस्था थियो, ०१७ सालमा पनि त्यस्तै थियो । १० वर्षको अवधिमा केही चेन्ज भएन । त्यतिखेर पैसा पनि कम थियो । अर्थमन्त्री रहेका सुवर्ण शमशेरले जम्मा पाँच करोड बजेट छुट्याउँथे । त्यसमा पनि दुई करोड त ऋण नै हुन्थ्यो ।
विकासका लागि प्रजातन्त्र हरण
महेन्द्रले परिवर्तन गरेको खासमा सत्ता लिनलाई मात्र हो । पूर्वाधार विकास लगायतका काम त जुन कुरा वीपीले गर्न खोजेका थिए, त्यही कुरा पछि महेन्द्रले गरेका हुन् । वीपीले गर्न खोज्दाचाहिँ पार्टीमा पनि र बाहिर पनि झगडा भो ।
महेन्द्रले ती काम वीपीबाट गराउन खोजेको भए पनि हुन्थ्यो होला । तर, वीपीको त्यति ठूलो व्यक्तित्व थिएन कि राष्ट्र नै बोकेर हिँडून् । बढ्ता व्यक्तित्व र जनतामा प्रभाव राजाकै थियो । महेन्द्रमा विकास र सबै कामको श्रेय आफैं लिऊँ भन्ने चाहना थियो ।
थुनिनेको लिष्टमा मेरो नाम १६ औं नम्बरमा
म न्यूयोर्कबाट फर्केर आउँदा राजाले ‘टेकओभर’ गरिसकेका थिए । ‘कु’ भएको चार दिन भइसकेको थियो । म एअरपोर्टमा ओर्लिने वित्तिकै सिंहदरबारमा लगियो ।
म सुवर्णलाई भेट्न कोलकाता नगई दिल्लीबाट सीधै काठमाडौं आएको थिएँ । मलाई थुन्न गोलघरमा लैजाने क्रममा जर्नेललाई सोधेँ, यहाँ को-को छ ? ।
उसले भन्यो, ‘वीपीलाई यहीँ राखेको छ ।’
मैले भनेँ, ‘हेर्नुस् जर्साब, म जेलमा गएपछि चाहिँ बाहिर आउँदिनँ फेरि । म न्यूयोर्कबाट यहाँ आएको हो । म थुनिन आएको होइन । त्यसकारण तपाईं राजासँग कुरा गर्नुस् । मलाई थुन्नू भन्ने कुरा आयो भने थुन्नुस्, नभए म भित्र गइसकेपछि आउँदिनँ ।’
भन्नुको मतलब म जेलमा थुनिने हो भने वीपीसँगै हुन्छु, राजाको हुन सक्दिनँ ।
उसले भन्यो, ‘हजुरको नाम त थुन्नुपर्ने लिस्टमा छ ।’
लिस्टमा जम्मा १७ जनाको नाम थियो । मेरो नाम १६ औं नम्बरमा थियो ।
डम्म कुहिरो लागेको बिहानको समय थियो । मैले लङकोट लगाएको थिएँ ।
मलाई न्यूयोर्कमै हुँदा अलिअलि आइडिया थियो, कू हुने सम्भावना छ भनेर । त्यहाँ एउडा म्याडमले खबर गरिन्, तिम्रो देशमा कू भयो भनेर । अमेरिकामा उसकै साथी थिए राजदूत ऋषिकेश शाह । मैले उनलाई फोन गरेर सोधेँ ।
उनले भने, ‘केही न केही त भएको छ । मैले खबर पाएको छैन, आएपछि तपाईंलाई भन्छु ।’
हामी त होटलमा बस्थ्यौं । एकछिनपछि ऋषिकेशले फोन गरे, ‘तपाईं र अच्युतराज रेग्मीलाई चाहिँ हाउस भंग भयो, तुरुन्तै त्यहाँ -अमेरिका) बाट निकालेर पठाइदिनू भन्ने खबर आएको छ ।’
म त सांसदको हैसियतमा गएको थिएँ महासभामा । हाउस नै भंग भइसकेपछि त हामी संसद सदस्य रहेनौं । त्यतिबेला यदुनाथ खनाल पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो ।
कहाँको टिकट काट्दिऊँ भन्ने कुरा सोधियो, अच्युतराजले म त कोलकाता जान्छु भने । मैले सोचेर मात्रै जवाफ दिन्छु भनेँ । पछि काठमाडौं जान्छु भनेँ । अच्युतराज र म दिल्लीसम्म सँगै आयौं । उनी कोलकातातिर लागे ।
म काठमाडौं आउनुको कारण, राजासँग कुरा गर्न चाहन्थेँ । मलाई थाहा थियो, राजाले मलाई थुन्दैनन् । राजासँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो ।
तुलसी गिरीले भने- नाटक गर्छन् राजा
मैले दरबारमा राजालाई फोन गर भनेपछि जर्नेल हच्कियो । दरबारमा हामीले कहाँ फोन गर्नु भन्यो । उसले डर र संकोच मान्यो ।
त्यसपछि मैले भनेँ, ‘तपाईंको चिफसा’बलाई फोन गर्नुस् ।’
चिफले फोनमा भनेछ, ‘त्यसो भन्छ भने एकछिन पख है ।’
हामी दरबारबाट के कुरा आउँछ भनेर बसिरहेका थियौं । एकछिनपछि खबर आयो, ‘ल, हजुर घर गए हुन्छ, छोड्दिनु भन्या छ ।’ चिफसा’बले दरबारमा फोन गरेर उताको खबर सुनाएछन् ।
मैले भनेँ, ‘तपाईंले मलाई एअरपोर्टबाट सोझै यहाँ गाडीमा ल्याउनुभो, मेरो बाकस छ । अब के म यो बाकस बोकेर घर जानु ?’ त्यतिखेर त काठमाडौंमा त्यति गाडी चल्दैनथे ।
त्यसो भनेपछि जर्नेलले मलाई घर पुर्‍याइदियो ।
घर पुगेर ल्यान्डलाइनबाट (त्यसबेला मोबाइल फोन हुने कुरै भएन) डा. तुलसी गिरीलाई फोन गरेँ ।
डा. गिरीले खिन्न स्वरमा भने, ‘मलाई पनि चार दिन थुन्दियो, भर्खर मात्रै घर आएको ।’
मैले भनेँ, ‘किन थुनेछन् त तपाईंलाई ? थुन्नुपर्ने काम त केही थिएन ।’
गिरीले भने, ‘नाटक गर्छन् राजाले । के गर्छन् के गर्छन् !’
उनले दरबारमा सम्पर्क गर्छु, दुवैजना जाऔं भन्ने कुरा गरे । उनैले भेट्ने समय मिलाए ।
भोलिपल्ट राजाले हामीलाई बोलाए ।
भेट हुनासाथै मैले राजालाई सोधेँ, ‘के काम गरिबक्सेको यो ?
राजासँग कुनै प्लान थिएन
मेरो प्रश्नमा राजाले जवाफ दिए, ‘अब मैले गरिसकेँ विश्ववन्धु । तिमीले मलाई म नआई केही नगर्नू त भन्या थियौ । तर, यहाँको अवस्था हेर्दा गर्नैपर्‍यो । नपत्याए डा. गिरीलाई पनि सोध । अब तिमीहरु नै गर, जे गर्छौ ।’
मैले डा. गिरीलाई भनेँ, ‘गजबका राजा रैछन् बा ! प्लान र प्रोग्राम केही
पनि छैन । यत्तिकै चेन्ज गरिदिए ।’
उनको त एउटै प्लान थियो, पावर लिने । पावर लिइहाले ।
त्यसपछि हामीले गर्नुपर्छ भनेर काम अघि बढायौं । राजाले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि पञ्चायती व्यवस्थामा नामदेखि लिएर सबै कामकाज हामीले नै गरिदिएका हौं ।
राजाको कुनै योजना थिएन, तर उनमा तागत त थियो । राजाकै नाममा सबै काम भएको हो ।
राजाको नाम, हाम्रो काम
पञ्चायत व्यवस्थामा हेर्दा सुरुको पाँच वर्षमा बडो छिटो विकासका कामहरु भएका छन् । पछि त हामीलाई नै निकाले । पञ्चायतमा झगडा बढ्दै गयो । जागिर खाने मान्छे बढ्ता हुन थाले ।
पञ्चायत व्यवस्थामा सबै कुराको जग सुरुको पाँच वर्षमै बसेको हो ।
बिर्ता खोस्ने, जग्गा बाँड्ने, बाटो बनाउने, स्कूल खोल्ने लगायतका कुरामा आधारतभूत तहको काम त्यहीबेलामा भएको हो ।
त्योबेलामा हामीलाई भारतले सहयोग गरेन । बाहिरका मुलुकहरुले पनि कुनै सपोर्ट नगरुन् भनेर सकेसम्म कोसिस गर्‍यो ।
पछि महेन्द्रको चीनसँग बढ्ता दोस्ती थियो । उनी अलिकति एन्टी इन्डियन थिए ।
म उनलाई भन्थेँ, ‘चाइनासँग दोस्ती त्यति निको हुँदैन । हाम्लाई छिमेकीका रुपमा चाहिँ ठीक हो । दुवै छिमेकी हुन् । चाइना भनेको बाघ हो । हेर्दा राम्रो छ । संगत पनि राम्रो देखिन्छ । राजाले बाघ पाल्नुपर्छ भनिन्छ । तर, त्यो बाघ पाल्न गाह्रो भो । त्यो रिसायो भने मालिकलाई मार्दिन्छ । इन्डिया भनेको चाहिँ गाई हो । त्यो पनि दुहुना गाई । घाँस खान्छ, रिसाए पनि केही हुँदैन, सिङले हान्छ र दूध दिन छोड्यो भने पनि फेरि ब्याउँछ, दूध दिन्छ ।’
पुस १ पछि भारतको रोल
भारतसँग त हाम्रो झगडै पर्‍यो । कांग्रेसका मान्छेहरु पनि भागेर उतै बसे । मचाहिँ वास्तवमा एन्टी इन्डियन छैन । म मात्र हैन, धेरै नेपालीहरु एन्टी इन्डियन छैनन् । इन्डियाको छुच्चो व्यवहारले एन्टी इन्डियन भएका हौं वास्तवमा । व्यवहारले नै सबै कुरा फरक पार्छ ।
भारतलाई घमण्ड छ, हामी ठूलो हौं भन्ने । आफूलाई बडे भाइ ठान्छ । यहाँ मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरुमा सबैतिर यस्तो पाइन्छ । युएन महासभामा जाँदा मेक्सिको र क्यानडाका मान्छेहरु मसँग भन्थे, ‘हामी तिमीहरुको मर्म बुझ्छौं । हामीलाई युएसएले बिग बोसको व्यवहार देखाउँछ ।’
क्यानडा र मेक्सिकोले त युएसएको व्यवहार सहन गाह्रो छ भने हामी त साना छौं नि !
(पुस १ को घटनाका एक प्रभावशाली पात्र ९० वर्षीय पाका राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापासँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेल र जोतारे धाइबाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
गरिबी निवारण : नामकै उपहास